Madaxweyne Farmaajo oo kulamo la qaatay Bulshada Rayidka ah magaalada Dhuusamareeb | SAHAN ONLINE
DHUUSAMAREEB – Madaxweynaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulamo wada tashi kula qaadanaya magaalada Dhuusamareeb qeybaha bulshada ayaa ku ammaanay culimada iyo dhalinyarada gobolka Galgaduud dadaalka ay ku bixinayaan nabadda iyo dib u heshisiinta.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay udub dhexaad u yihiin qorshayaasha horumarineed ee dowladda gaar ahaana arrimaha dib u heshisiinta,loogana baahan yahay in ay kasoo dhalaalaan kaalintooda maadaama ay in ka badan 70% ka yihiin shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale Madaxweyne Farmaajo oo xalay kulan gaar ah la qaatay culimada ayaaa bogaadiyey kaalintooda ku aaddan wacyigelinta bulshada deegaanka,wuxuuna ku ammaanay sida ay naf iyo maalba ugu hureen in laga cirib tiro deegaannadan kooxda argagaxisada ah ee Al-Shabaab.
Markii laga hadlayo dagaalka ka dhanka ah argagixisada Alshabaab, waxaad tusaale wanaagsan u tihiin gobollada kale ee dalka, waayo idinkoo kaashanaya dhammaan qeybaha bulshada deegaankan waxaad ku guuleysateen in aad cadoowgaas la dagaalantaan oo aad ka dabar gooysaan deegannadan.” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalintii saddexaad ku sugan magaalada Dhuusamareeb,wuxuuna wadahadallo ku aadan dardargelinta hawlaha dib u heshisiinta iyo nabadeynta Galmudug.